Maka fialantsasatra ve ny heloka bevava? | Vaovao Mafana momba ny dia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Other • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Maka fialantsasatra ve ny heloka bevava?
Septambra 7, 2020
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maka fialantsasatra ve ny heloka bevava?
Mijery vaovao amin'ny fahitalavitra bebe kokoa noho ny hatramin'izay? Mieritreritra ve ianao fa feno olona ratsy fandrobana sy manimba trano fivarotana ity firenena ity? Misaotra an'ireo olom-boafidy ankehitriny… fantatrao izy ireo, mitaky trano sy vola aloa amin'ny tranobe hetra izy ireo ary tsy fantany ny fomba hifehezana azy ireo. Covid-19 mandritra ny fihazonana asa feno - manana fotoana be dia be tsy voalamina isika. Ny Internet sy ny fahitalavitra dia manome antsika fotoana hijerena herisetra sy asan-jiolahy mipoaka eny an-dalambe amin'ireo tanàna sy tanàna erak'izao tontolo izao izay manamafy ny fiheverana fa mety matory isika nefa ireo mpanakorontana eo amin'ny fiarahamonina dia be atao.
Sarobidy ny fotoana malalaka
Amin'ny toe-javatra samihafa dia ho toby sambatra izahay miaraka amin'ny fotoana malalaka - fialan-tsasatra toa tsy misy farany! Hampiasainay ity fotoana ity mba hivezivezena, fanaovana fanazaran-tena ao amin'ny gym, fitsidihana namana sy fianakaviana, hanatontosana fampianarana fanampiny amin'ny oniversite na izany aza, ny fotoana COVID-19 dia midika fa voaroaka ao an-tranontsika isika, raha tsy hoe, mazava ho azy, isika dia tsara vintana fa anisan'ny mpanankarena uber izay mampiseho ny fotoana malalaka ananany amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranony faharoa (na fahatelo na fahefatra), manao selfie eo amin'ny sambon'izy ireo, mampiseho ny endrik'izy ireo Zoom tsy misy makiazy fa miaraka amina atiny misy trano sy zaridaina mitaona aingam-panahy. Ho antsika izay mihidy ao amin'ny trano Manhattan kely, mihantona eo am-pelatanantsika ny fotoana.
Raha COVID-19 ihany io - angamba ho afaka hiatrika an'ity vonjy taitra fitsaboana ity isika amin'ny fahatokiana bebe kokoa sy aplomb. Mampalahelo fa tsy ny coronavirus ihany io, fa koa ny isan'ny tsy an'asa, ny fahafatesan'ny orinasa kely, ny famonoana olona novonoina na naratra noho ny lokony, tsy noho ny fihetsik'izy ireo. Ny fahasimban'ny fahatsapana ny demaokrasia amerikanina dia nataon'ireo olona izay tsy mino fa tsara ho an'ny fiarahamonina ny fihetsiketsehana ary fomba lehibe sy hita maso hanehoana ny zonay araka ny lalàm-panorenana momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny zo hiangona.
Amin'ny alàlan'ny hetsi-panoherana sy fihetsiketsehana dia fantatsika isan'andro fa ny olona voafidy hitarika ny masoivohon'ny governemanta, fanjakana sy federaly dia tsy ampy tanteraka satria tsy ampy saina, kompà moraly ary fahaiza-manao ilaina hitarika antsika mandritra ireo andro tena maizina ireo. Manomboka amin'ny filankevitry ny tanàna ka hatrany amin'ny antenimieram-panjakana, manomboka amin'ny ben'ny tanàna ka hatramin'ny governora, manomboka amin'ny loholona ka hatrany amin'ny vondrona mpiaro, ny fomba nahitan'ireo olona ireo ny làlan'ny masoivoho sy fikambanana maro tsy takatry ny saiko. Hotsaraina ireo olona ireo hitantana trano fisotroana kafe eo an-toerana nefa manana ny fahefana (sy ny fahefana) hitantana an'i Etazonia Etazonia izy ireo, mifehy ny fomba fiainantsika sy ny fahafatesantsika.
Sahirana ny mpanao heloka bevava any New York
Raha maro amintsika no mamily ny kodiarantsika amin'ny quarantine, ny hafa kosa mivoaka ary hamorona hamamoana eny an-dalambe. Ny fijerena ireo antontan'isa momba ny heloka bevava tato ho ato dia mampiseho fa ny vono olona tany New York dia nitombo 30 isan-jato mahery (235 vs. 181) nandritra ny fito volana voalohany tamin'ny 2020 raha ampitahaina tamin'ny fito volana voalohany tamin'ny taona 2019. 244 ny trangana fitifirana eran'ny tanàna tamin'ny Jolay 2020 , raha ampitahaina tamin'ny tranga fitifirana 88 tamin'ny Jolay 2019, fitomboana 177 isan-jato eo ho eo. Taona iray hatreto, hatramin'ny 31 Jolay, dia nisy fiakarana 72 isan-jaton'ny tranga fitifirana eraky ny tanàna (772 vs. 450). Nisy ihany koa ny fitomboan'ny mpamaky trano - hatramin'ny 31 isan-jato (1297 vs. 989) tamin'ny volana Jolay ary nitombo 45 isan-jato (8594 vs. 5932) isan-taona hatramin'ny 31 Jolay.
Mahaliana ny manamarika fa ho an'ny volana Jolay, ny fanolanana dia nihena sahabo ho 6 isan-jato (153 vs. 163); na izany aza, tsy misy tatitra momba ny fanolanana ary mety tsy marina io statistika io. Na dia mitarika antsika hino zavatra hafa aza ny haino aman-jery, ny heloka bevava fankahalana dia nihena sahabo ho 29 isan-jato (170 vs. 241).
Fizahan-tany momba ny fiainana
Raha ampidirina amin'ny areti-mandringana ny asan-jiolahy, ny fijerena ny savony, ny famerana ny seranam-piaramanidina, ny fanidiana maro ny fisakafoanana anaty trano sy ny kianja fanaovana fanatanjahan-tena any ivelany, ary ny teatra Broadway dia nijanona hatramin'ny 2021, tsy mahagaga raha mirongatra ny fizahan-tany any New York ny fiainana-fanohanana. Tamin'ny telovolana farany tamin'ny taom-piasana 2020, nifarana tamin'ny 30 Jona, ny Contrôleur an'ny New York City Scott Stringer dia nanombana fa ny fatiantoka ho an'ny tanàna amin'ny hetra amin'ny hotely dia mitentina $ 270 tapitrisa, miampy, 250 tapitrisa dolara hafa amin'ny fidiram-bola mifandraika amin'ny fizahan-tany mandritra io vanim-potoana io ihany.
Tamin'ny andro BC (talohan'ny COVID-19), ny Big Apple no tena Deal, miaraka amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany nandritra ny 10 taona lasa. Tamin'ny taona 2019, ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nanohana asa mihoatra ny 403,000, niteraka +/- $ 72 miliara ho an'ny hetsika ara-toekarena tanteraka (Jolay 2020 Report, NYC & Company). Tamin'ny taona 2019, ny hetsika fitsangantsanganana sy fizahantany dia tompon'andraikitra amin'ny $ 7 miliara amin'ny hetra avy amin'ny fanjakana sy eo an-toerana, ao anatin'izany ny $ 4.9 miliara ho an'ny tanànan'i New York.
Mihidy, nofoanana, nahemotra
Vokatry ny toe-java-misy ankehitriny any New York, ny biraon'i Stringer dia naminavina $ 1.5 miliara ho an'ny vola miditra amin'ny hetra fizahan-tany ao an-tanàna tamin'ny taona 2021, izay maneho ny 25 isan-jaton'ny vola miditra an-tanàna amin'ny hetra avy amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny vola miditra amin'ny hetra amin'ny varotra.
Tamin'ny volana septambra 2019, ny fampisehoana lamaody fararano, ny lalao tenisy ary ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana dia nahasarika olona mihoatra ny 908,000, namokatra vola an-jatony tapitrisa dolara avy amin'ny loharano toy ny hotely, trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany ary fitateram-bahoaka miampy hetra amin'ny varotra sy trano fonenana.
Ny US Tennis Open Tennis (notontosaina tao amin'ny USTA Billie Jean King National Tennis Center, Queens) dia tanterahina tsy misy mpankafy amin'ny seza. Tamin'ny taona 2019, ny hetsika dia nandefa mpijery 738,000 niaraka tamin'ny 115,355 hafa nandray anjara tamin'ny US Open Fan Week (hetsika 7 andro maimaim-poana alohan'ny hetsika lehibe). Hotontosaina nomerika ny Herinandron'ny lamaody, ary azo inoana fa tsy hisy seho mivantana miaraka amin'ny mpijery. Na ny Katedraly St. Patrick aza dia miatrika krizy mitentina 4 tapitrisa $ (25 isan-jaton'ny vola miditra isan-taona). Ny fiangonana dia miantehitra amin'ny fanomezana voangona ao amin'ny Mass mba hiasa (manomboka amin'ny jiro ka hatramin'ny karamain'ny mpiasa) ary amin'ny fihenan'ny mpitsidika sy ny tsy fisian'ny hetsika fanangonana vola, dia tsy misy ny vola ampiasaina.
Ny heloka bevava aostralianina dia mampihena ny fizahan-tany
Tsy mijoro irery i New York raha ny fihenan'ny fizahan-tany noho ny fifangaroan'ny asa ratsy sy ny COVID-19. Ny Territories Avaratra ao Aostralia dia miatrika fitomboan'ny asan-jiolahy miaraka amin'ny fihenan'ny fizahan-tany. Raha ny filazan'ny Lehiben'ny Fizahan-tany Aostralianina Afovoany, Dale McIver, dia mihoatra ny fahasimbana ny vokatry ny heloka bevava, "Ny fiatraikany amin'ny vidin'ny heloka bevava sy ny fahasimbana mitohy, fa ny fiadanam-po ara-pihetseham-po an'ny tompona orinasa sy ny mpiasa… , ny fifanakalozan-kevitra dia mifantoka amin'ny fampitomboana ny fisian'ny polisy sy ny fanatsarana ny fifandraisana mba hanavaozana sy hampahafantarana ny mpiara-monina ny heloka bevava. Ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta dia mihevitra ihany koa ny fampitomboana ny fisian'ny manamboninahitra truancy sy mpiasa tanora hifaneraserana amin'ireo tanora sahirana.
Eo anelanelan'ny fandaniana mifandraika amin'ny asan-jiolahy sy ny fahaverezan'ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fameperana ny dia (noho ny COVID-19), dia mety hisy fatiantoka hatrany amin'ny $ 15.9 tapitrisa amin'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika mandritra ny taona mifarana amin'ny martsa 2020. Rehefa atambatra izany miaraka amin'ny famandrihana mialoha amin'ny alàlan'ny Alice Springs Visitor Information Center, ny Northern Territories dia miatrika ny isa ambany indrindra amin'ny fizahantany hitan'ny fizahantany Central Australia tato ho ato. Ity faritra malaza any Aostralia ity matetika dia eo afovoan'ny tafio-drivotra misy refy mandrahona ny fototra toekarena ao amin'io sehatra io.
Fitsangantsanganana ao Chile
Any Chili, ny sekretera misahana ny fisorohana ny heloka bevava, Katherine Martorell, miaraka amin'i Mnica Zalaquett ao amin'ny fizahan-tany, dia mino fa ny fampahalalana ireo mpitsidika ny olan'ny heloka bevava dia hanampy amin'ny fanonerana ny olana, ary hanampy ireo mpitsidika hahatakatra ny fomba TSY hahatongavan'ny mpanao heloka bevava, ary ny fomba hisorohana halatra sy fandrobana. Ny tolo-kevitr'ireo mpizahatany dia misy fitsangatsanganana efa voatondro sy fizarana ny fandaharam-potoana amin'ny hafa raha sendra vonjy maika. Ny heloka bevava atao amin'ireo mpizahatany dia manomboka amin'ny halatra ka hatrany amin'ny halatra misy herisetra sy fampitahorana indrindra mandritra ny volana Janoary ary any amin'ny faritra Metropolitan, Antofagasta ary Valparaso.
Ho fanampin'ny fikorontanana sivily dia iharan'ny COVID-19 i Chile ary ny Departemantam-panjakana amerikana dia mamporisika mafy ny handinihana tsara alohan'ny handehanana mankany amin'ity toerana ity; Ny COVID-19 dia nampitombo ny ambaratonga fampitandremana avy amin'ny The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ka hatrany amin'ny Level 3 Travel Health Notice. Tamin'ny 1 septambra 2020, nisoratra anarana ny raharaha 412,145 nanamarina ny raharaha COVID-19 i Chile ary eo am-piandrasana ny ora manomboka amin'ny 11 PM ka hatramin'ny 5 maraina. Ny fanakonana tarehy dia tsy maintsy atao.
Mba hanakanana bebe kokoa ny mpandeha mankany amin'ity toerana ity dia mety hikatona ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina, mety misy fijanonan'ny dia, baiko an-trano, fanakatonana orinasa ary fepetra fanampiny vonjy maika. Nisy ny fihetsiketsehana lehibe natao tany Santiago sy tanàn-dehibe hafa. Fihetsiketsehana maro no niteraka fahasimban'ny fananana, fandrobana, fandorana trano ary fanakorontanana. Nampiasa tafondro rano sy baomba mandatsa-dranomaso ny manampahefana ao an-toerana hanakorontanana ny fihetsiketsehana ( https://travel.state.gov ).
Niato ny fizahan-tany ny Repoblika Dominikanina
Tamin'ny taona 2019, BC (talohan'ny COVID-19), nitombo 5.1 isan-jato ny harin-karena faobe ho an'ny Repoblika Dominikanina. Vokatry ny areti-mandringana, ny vinavinan'ny IMF manomboka amin'ny 14 aprily 2020 ny harin-karena faobe dia antenaina hidina hatramin'ny -1 isan-jato. Ny Departemantam-panjakana amerikana dia namoaka fampitandremana ambaratonga 4 ho an'ny Repoblika Dominikanina izay manome sosokevitra amin'ny torohevitra "Aza mandeha". COVID-19 (Fampandrenesana momba ny fahasalamana momba ny dia 3, CDC), hatramin'ny 21 aogositra 2020, ny DR dia nitatitra 89,867 tranga voamarina fa COVID-19 sy 153 no voamarina fa maty.
Matetika ireo mpitsidika ny DR dia iharan'ny herisetra, ao anatin'izany ny fanaovana herisetra ara-nofo, ny fidirana an-trano, ny fanendahana mitam-piadiana ary ny famonoana olona. Misy fitaovam-piadiana ary rehefa ampiarahina amin'ny zava-mahadomelina tsy ara-dalàna sy ny rafi-pitsarana ady heloka bevava malemy dia tokony hitandrina am-pitandremana fatratra ( www.osac.gov ).
Mampitandrina ny mpitsidika ny “mpisolovava Rogue” izay mijoro eo akaikin'ny tobin'ny polisy fizahan-tany (CESTUR) ny governemanta kanadiana ary manandrana manangona vahiny very saina izay entina any amin'ny toeram-piantsonana ho mpanjifa. Miezaka mangalatra vola be amin'izy ireo izy ireo amin'ny alàlan'ny fanolorana solontena ara-dalàna na fanampiana amin'ny fialana amin'ny fonja.
Fanamarihana fampitandremana iray hafa avy amin'ny governemanta kanadiana izay manintona ny saina amin'ny carte de crédit sy ny hosoka ATM miaraka amin'ny tolo-kevitra mba tsy hampiasa mpamaky karatra amin'ny endrika tsy ara-dalàna na tsy mahazatra. Ny mpizahatany dia tokony handrakotra ny keypad amin'ny tanana iray rehefa miditra amin'ny PIN-dry zareo ary manamarina tsara ny fifanakalozana tsy nahazoana alalana amin'ny fanambarana kaonty.
Nampitandremana koa ireo mpizahatany mba tsy hamela sakafo na zava-pisotro tsy misy mpiambina na fikarakarana olon-tsy fantatra ary mitandrina amin'ny fanekena sakafo maivana, siligaoma na sigara avy amin'ny olom-pantatra vaovao satria ireo entana ireo dia mety misy zava-mahadomelina mety hampidi-doza ny mpizahatany amin'ny fanaovana herisetra ara-nofo sy fandrobana.
Ny vehivavy mandeha irery dia mety iharan'ny fanorisorenana sy fanararaotana am-bava. Ny trangana herisetra, fanolanana ary herisetra ara-nofo amin'ireo vahiny dia voalaza tao amin'ny trano fandraisam-bahiny amoron-dranomasina ary misy tranga sasany nahatafiditra mpiasan'ny hotely. Manoro hevitra ny vehivavy mba tsy handray fitateram-bahoaka na handeha irery amin'ny hariva.
Ny mpitarika ny indostrian'ny fizahan-tany any Gresy dia nanantena fa ny taona 2020 dia taona fanarenana; na izany aza, ny valanaretina coronavirus mitohy dia nanimba an'ity fanantenana ity satria ny IMF dia naminavina ny fihenan'ny 10 isan-jato amin'ny harin-karena faobe sy ny tahan'ny tsy fananan'asa 22.3 isan-jato ho an'ny 2020.
Talohan'ny COVID-19, ny indostrian'ny fizahantany dia nandray anjara 21 isan-jato tamin'ny toekarena grika. Satria nikatona ny firenena tsy ho an'ny EU ary ny fizahan-tany Eoropeana dia niaina fahaverezana asa be loatra tao amin'ny orinasa i Gresy. I Gresy dia iray amin'ireo firenena voalohany tany Eropa nanidy ny harinkarem-pireneny izay nahitana tranga somary vitsy dia vitsy; na izany aza, ny fanidiana hidina dia nanakana ny indostrian'ny fizahantany saika. Rehefa nanokatra ny sisintaniny ho an'ny fizahantany tamin'ny volana Jona izy, dia niaina fiakarana tampoka tamin'ny tranga COVID-19 ny firenena, ary nisy fitomboana kely tao amin'ny orinasa.
Misy vaovao tsara ho an'ny mpitsidika mikasa ny hitsidika an'i Gresy amin'ny 2021; hitan'ny Departemantam-panjakana amerikana fa i Athena dia “toerana misy fandrahonana ambany noho ny heloka bevava atodika na misy fiantraikany amin'ny tombotsoan'ny governemanta amerikana;” na izany aza, ny mpitsangatsangana dia tokony hahafantatra ny asan-jiolahy eny an-dalambe (izany hoe harom-paosy, fangalarana poketra ary halatra finday) izay miseho amin'ny faritra fizahan-tany sy amin'ny rafitra Metro (lalamby sy bus). Tokony ho mailo ny mpitsidika rehefa mitsidika an'i “Laiki” (tsenan'ny tantsaha) satria ny hetsika dia manarona vondrona mpanao heloka bevava. Ny governemanta koa dia manome sosokevitra hitandrina amin'ny bara sy klioba satria ny sasany manompo fanahy sandoka na an-trano namboarina hanana hery tsy fantatra.
Tena fandrahonana ho an'ny mpitsidika any Gresy? Maty ny fifamoivoizana! Gresy dia iray amin'ny taha ambony indrindra amin'ny fahafatesan'ny olona isan-kalitaona ao amin'ny Vondrona eropeana iray manontolo. Ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina dia misy moto sy môtô scooter ary ny tsy fampiasana fehikibo fiarovana sy fiarovan-doha môtô - izany rehetra izany dia mampitombo ny fahasimban'ny fifamoivoizana. Ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana dia mitranga amin'ny hariva mandritra ny vanim-potoana fahavaratra sy fialantsasatra.
Ny fahatafintohinana fifamoivoizana any Atena sy ny manodidina ary tanàna lehibe hafa dia misy: hafainganam-pandeha tafahoatra, mpamily misavoritaka, tsy fanarahana ny lalana mahitsy, tsy firaharahiany ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ny takona-pifamoivoizana ary ny fivezivezena mafy. Any ivelan'ny faritra an-tanàn-dehibe, ny lalana ety an-tendrombohitra sy ny toetr'andro mangatsiaka dia mety hampitombo ny toe-draharaha mamily sy ny fanidiana azy ireo. Ho solon'ny hafainganam-pandeha, ny US Department dia manoro hevitra ny amin'ny fitateram-bahoaka.
Toerana hojerena indray
Alfred Wierusz-Kowalski, The Polish Wedding Ride, 1915
Ao anatin'ny herintaona na roa taona ho avy, ny fizahan-tany dia ho ampiana ao amin'ny lisitra "hatao" ho an'ireo mpandeha manerantany izay maniry fatratra ny hamela ny 2020 ho an'ny mpahay tantara. Rehefa manangona ny lisitry ny toerana haleha sy ny zavatra hatao mandritra ny 2021 izahay dia misy toerana vitsivitsy izay tokony hojerena tsara alohan'ny hahazoana toerana ao amin'ny lisitra laharam-pahamehana.
Araka ny lazain'i Rhiannon Ball (Mapquest.com), ireto toerana itodiana ireto dia mety mitaky fanemorana:
Ciudad Juarez, Mexico. Ny asan-jiolahy mahery setra ary fivarotana zava-mahadomelina no mahatonga ity toerana ity ho iray amin'ireo tanàna mahery setra indrindra ao Mexico. Mihombo ny asan-dahalo noho ny kolikoly ataon'ny polisy… ampiasain'ny mpivarotra zava-mahadomelina na andoavan'ny polisy ny heloka bevava maro izay mamela ny famoahana heloka bevava maro.
Acapulco, Mexico. Herisetra andian-jiolahim-boto ary famonoana olona mifandraika amin'ny zava-mahadomelina no mahatonga ity toerana mampidi-doza ho an'ny mpandeha ity. Antsoina hoe “renivohitry ny famonoana olona” i Mexico, misy ny isan'ny mpamono olona ambony indrindra (142 isaky ny olona 100,000 XNUMX). Raha manapa-kevitra ny hitsidika ianao, aza miala amin'ny fiarovana ny toeram-pialofana.
Tanànan'i Guatemala, Goatemalà. Miatrika herisetra mifandraika amin'ny zava-mahadomelina ny firenena, fanondranana olona sy fitaovam-piadiana, tahan'ny famonoana olona betsaka, fandrobana amoron-dalana, fitazonana bisy ary fanodinana fiara.
San Pedro Sula, Honduras. Heverina ho iray amin'ireo tanàndehibe volomparasy indrindra eran'izao tontolo izao, izy no manana taha ambony indrindra mamono olona eran'izao tontolo izao (169 isaky ny 100,000). Malaza amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana sy fampiasana basy tsy ara-dalàna sy mpizahatany koa ny firenena amin'ny asan'ny fanendahana sy halatra.
Cape Town, Afrika Atsimo. Ny fahantrana sy ny korontana ara-tsosialy dia miteraka heloka bevava mahery vaika mifandraika amin'ny zava-mahadomelina sy andian-jiolahy miaraka amin'ny olona 100,000 130 eo ho eo amin'ny andian-jatovo miisa 2018 (XNUMX). Manoro hevitra i Ball mba hisorohana ny toerana mampidi-doza ary tsy tokony handeha irery ny vehivavy aorian'ny filentehan'ny masoandro.
Toerana iray hafa hijerena ny dia i Belize. Miaina fanidiana ny sisintany sy ny seranam-piaramanidina ny firenena amin'izao fotoana izao, fandrarana ny dia, heloka bevava mahery setra (izany hoe herisetra ara-nofo, fanafihana an-trano, fanendahana mitam-piadiana ary vonoan'olona) Ny mpitsangatsangana dia ampandrenesina hitandrina rehefa mandeha any amin'ny ilany atsimo amin'ny tanànan'i Belize satria tsy manana loharanom-pahalalana sy fiofanana ilaina ny polisy eo an-toerana hamaliana ireo tranganà heloka bevava (Travel.state.gov).
Ny Mobility Market Outlook dia nitatitra ny fihenan'ny 34.7 isan-jato na $ 447.4 miliara ny fidinan'ny fidiram-bola eran-tany ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny taona 2020. Ny vaovao tsara dia hiova izany amin'ny farany ary fotoana mety indrindra izao handinihana ny taona 2021 sy ny sisa. .
Ireo mpandeha raharaham-barotra sy fialam-boly dia manomana ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny 2021 ary tokony handinika torolàlana vitsivitsy rehefa mandroso:
Tombana mifampiraharaha. Azo inoana fa hitombo ny tahan'ny amin'ny 2021, mba hitazomana ny fandaniam-bola ho ambany, hifampiraharaha amin'ny tahan'ny rivotra sy hotely IZAO.
Diniho ny vidiny rehetra. Jereo mihoatra ny vidin'ny zotram-piaramanidina, trano fandraisam-bahiny ary hofan-trano. Na dia toa mahasarika aza ny tahan'ny toekarena, aza hadino ny vidiny mifandraika amin'izany (izany hoe ny sarany entana, ny laharam-pahamehana, ny toerana misy ny tongotra, ny toerana) alohan'ny handoavana ny vidiny.
Jereo ny fandaniana amin'ny dia amin'ny taona 2018 sy 2019 alohan'ny hamaritana ny fotoana sy ny vola azo alefa amin'ny 2021 sy 2022.
Ny Amerikanina dia mikasa ny hivezivezy amin'ny 2021 (GetYourGuide.com) miaraka amina hetsika voaomana amin'ny dia 3.58 voalahatra. Ny fikarohana nataon'ny AirportParkingReservations.com dia mahita fa 39 isan-jaton'ny mpandeha no matoky ny dia amin'ny 2021 ka 44 isan-jato no milaza fa "matoky tena". Mpanolo-tsaina mpizahatany COVID-19 Sentiment Barometer dia nahita fahalianana lehibe amin'ny toeran-trano izay misy 42 isan-jaton'ny fangatahana mifantoka amin'ny toeran'i Etazonia.
Ny fahafantarana fa misy rahampitso tsara kokoa, androany dia fotoana mety hanombohana mikapoka ny fikarohana an'i Google hahitanao ireo toerana itodiana izay tena manintona indrindra (izany hoe, tsy misy / asa ratsy, fotodrafitrasa fikarakarana ara-pahasalamana tena tsara, lalana tsara ary fanaraha-maso ny fifamoivoizana), ireo daty nanaovanao te-hivezivezy ary teti-bola mety.
VOTE. Alohan'ny hiakaranao sy handehananao
Mbola misy zavatra iray hafa tokony hatao alohan'ny handehanana any amin'ny toerana halehanao manaraka. Misoratra anarana amin'ny HIDIANA!